IsiChobo seCartridge seCandelo lokucoca ulwelo-Abavelisi beCartridge yokuCoca iCartridge, abaXhasi
Ihowuliseyili i-10 "20" 30 "40" Ixabiso le-0.45 iMicron yokuTywina i-RO yangaphambi kokucoca ulwelo lweCartridge yokuCoca iCartridge yokuHlaziya kwaManzi
Icoldridge yokusonga yokugoba yenziwe nge-ultra-fine polypropylene fiber membrane kunye nelaphu elingalukwanga okanye (ucingo olunemingxunya) njengoluhlu oluxhasayo. Iqokobhe, intonga esembindini kunye nesigqubuthelo sokugqibela seqokobhe lokucoca ulwelo lwenziwa kwaye lwenziwe ngobuchwephesha obunyibilikayo bokunyibilikisa, ngaphandle kokuncamathela, akukho kuvuza, akukho kuphakathi kuyawa kwaye akukho kungcoliseka kwesibini. Microporous PP ukusonga iCartridge yokusetyenziswa ngokubanzi kushishino lokucoca ulwelo ngaphambili isiphelo pretreatment kunye terminal unit ukuhluza. Kwinkqubo yokuhluza okuphakathi kunye nonyango lwamanzi kwimizi-mveliso yamachiza, amayeza, ishishini lamandla kunye nokhuseleko kushishino lokusingqongileyo, liyunithi yokusebenza ebalulekileyo.
10inch echibini lokucoca ulwelo echibini
Ukusetyenziswa kwecebo lokucoca ulwelo lwe-polypropylene edibeneyo izinto zokucoca ulwelo, iqokobhe le-polypropylene yiva ukutywina Akukho glue kwimveliso, Ukucoca ilahleko ephakathi kunokusetyenziselwa ulwelo kunye negesi.
Icebo lokucoca ulwelo nge-intshi eli-10 nge-222/226 kunye neFin + o-ring 0.1micron, 0.25 micron, 1 micron kunye ne-5 micron
Icebo lokucoca ulwelo nge-intshi engama-20 nge-222/226 kunye neFin + o-ring 0.1micron, 0.25 micron, 1 micron kunye ne-5 micron
Iifilitha zamanzi zeNdlu iphela, Kk Gac Cto Isihluzi seCartridge, Icebo lokucoca ulwelo emgceni, Kk Isihluzi seCartridge, Isihluzi sePp Meltblown Cartridge, iCartridge yokucoca amanzi,